USB Stick ကို Password နဲ႔ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ ? - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
Home > Tutorial > USB Stick ကို Password နဲ႔ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ ?
USB Stick ကို Password နဲ႔ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ ?
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) 9:01 PM PC Knowledge, pc software, Tutorial
ဥပမာအားျဖင့္ Word မွာ ဖိုင္ကို ဖြင့္ထားၿပီး File Info ထဲသြားပါ။ Protect Document ကို ႏွိပ္ၿပီး Encrypt with Password ကို ႏွိပ္ပါ။ ေနာက္အဆင့္မွာ Password ထည့္ေပးပါ။
USB Stick ကို Password နဲ့ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ ?
USB Stick များဟာ သေးငယ်ပေါ့ပါးပြီး ဒေတာများ ထည့်သိမ်းထားဖို့အတွက် အလွန် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ USB Stick ထဲမှ အရေးကြီး ဒေတာများကို အခြားလူများက လွယ်ကူစွာ ခိုးယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်း၊ ပီစီများမှာလို USB Stick များကို Password ဖြင့် လွယ်ကူစွာ ကာကွယ်ထားလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် USB Stick ကို Password ဖြင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Tools များ ရှိပါတယ်။
၁။ ဖိုင်များကို Password ဖြင့် ကာကွယ်ပါ။
USB Stick များကို Password ဖြင့် ကာကွယ်ပေးတဲ့ Tools များဟာ Encryption ကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် အချိန်ယူရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဖိုင်တွေကို လျှင်မြန်စွာ သုံးချင်ရင် အဲဒီ Tools များက အဆင်မပြေပါဘူး။ အဲဒီအစား အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်များကိုပဲ Password ဖြင့် ကာကွယ်ထားပါ။ Microsoft Word, Excel အပါအဝင် ဆော့ဖ်ဝဲများစွာမှာ ဖိုင်ကို Password ဖြင့် ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် ပါပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် Word မှာ ဖိုင်ကို ဖွင့်ထားပြီး File Info ထဲသွားပါ။ Protect Document ကို နှိပ်ပြီး Encrypt with Password ကို နှိပ်ပါ။ နောက်အဆင့်မှာ Password ထည့်ပေးပါ။
PDF ဖိုင်များကို Password ဖြင့် ကာကွယ်ချင်ရင် PDFTK Builder ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
၂။ Password ဖြင့် ကာကွယ်ထားတဲ့ Partition ဖန်တီးပါ။
Rohos Mini Drive က သင့် USB Stick မှာ Password ဖြင့် ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့ Partition ကို ဖန်တီးပေးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက USB Stick မှာ 2GB အရွယ်အစားအထိ ရှိတဲ့ Partition ကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
Rohos Mini Drive ကို သင့် ပီစီမှာ အင်စတောလုပ်ပါ။ ပြီးရင် USB Stick ကို ပီစီမှာ တပ်ဆင်ပါ။ Rohos Mini Drive ကို ဖွင့်ပါ။ Encrypt USB Drive ကို နှိပ်ပါ။ Stick ကို ရွေးပါ။ Password သတ်မှတ်ပြီး Create Disk ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင့် Stick မှာ Password ဖြင့် ကာကွယ်ထားတဲ့ Partition ကို ဖန်တီးပေးမှာပါ။
USB Stick မှာ ဖန်တီးထားတဲ့ Partition ကို ဖွင့်ချင်ရင် Stick ရဲ့ Root Folder မှ Rohos Mini.exe ကို နှိပ်ပါ။ Password ထည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင့်ဖိုင်များကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Partition ကို ပိတ်ချင်ရင် Windows Taskbar Notification Area မှ Rohos Icon ကို Right-Click နှိပ်ပြီး Disconnect ကို နှိပ်ပါ။
၃။ USB Stick တစ်ခုလုံးကို Encrypt လုပ်ပါ။
VeraCrypt ဟာ သင့် Stick ထဲမှာပဲ Run နိုင်တဲ့ Portable App ဖြစ်ပါတယ်။ VeraCrypt ရဲ့ အခမဲ့ ဗားရှင်းဟာ 2GB အရွယ်အစားအထိ ရှိတဲ့ USB Stick ကိုသာ Encrypt လုပ်ပေးပါတယ်။ သူ့ကို USB Stick မှာ အင်စတောလုပ်ပြီး ဖွင့်ပါ။ သင့်ရဲ့ Stick ကို ရွေးပေးပြီး Create Volume ကို နှိပ်ပါ။
Stick တစ်ခုလုံးကို Encrypt လုပ်ဖို့ Encryptanon-system partition/drive ကို ရွေးပေးပြီး Next ကို နှိပ်ပါ။ နောက်အဆင့်မှာ Standard VeraCrypt Volume ကို ရွေးပေးပြီး သင့် Stick ကို ရွေးပေးပါ။ အိုကေ နှိပ်ပြီး Next နှိပ်ပါ။
Stick တစ်ခုလုံးကို Encrypt လုပ်ဖို့ Encrypt partition in place ကို ရွေးပြီး Next နှိပ်ပါ။ နောက်အဆင့််မှာ Encryption and Hash Algorithm ကို ရွေးပေးပါ။ Volume Password သတ်မှတ်ပေးပါ။ နောက်အဆင့်မှာ Cryptographic Strength of the Encryption ကို သတ်မှတ်ဖို့ Mouse ကို ရွေ့လျားပေးပါ။
Wipe Mode ကို ရွေးပေးပါ။ အချိန်ကြာကြာ Wipe ပြုလုပ်ရင် ပိုမို လုံခြုံပါတယ်။ Encrypt ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင့် Stick တစ်ခုလုံးကို Password ဖြင့် ကာကွယ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
USB Stick ကို Password နဲ႔ ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ ? Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 9:01 PM Rating:5USB Stick မ်ားဟာ ေသးငယ္ေပါ့ပါးၿပီး ေဒတာမ်ား ထည့္သိမ္းထားဖို႔အတြက္ အလြန္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ USB Stick ထဲမွ အေရးႀကီး ေဒတာမ်ားက...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 9:01 PM